Bilaogera Tao Gaza Mibitsika Ny Tantara Mampangitakitaka Nialàny Ireo Fanafihana Fiaramanidina Israeliana Teo Am-piampitàna Ny Sisintany Tao Rafah Ho Any Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Aogositra 2014 4:01 GMT
Vakio amin'ny teny Svenska, Deutsch, Español, English
Nananararaotra ny fampitsaharana fifandonana teo amin'i Israely sy ny Hamas, andian'olona nisy Palestiniana 70 teo ho eo no nandositra niala ny tranony ary niezaka ny ho any Ejpta niampita ny sisintany tao Rafah ary tsy nahita afa-tsy ny hoe nikatona sy tsy nisy olona tao. Efa fotoana vitsivitsy ilay andian'olona no voafandrika teo anelanelan'i Ejipta sy Gaza mandra-pamohan'i Ejipta ny sisintany.
Tao anatin'ireo izay niezaka ny handositra i Nalan Al Sarraj, 23 taona, bilaogera namako, izay nibitsika hatrany mikasika ny zavatra niainany tao Gaza hatramin'ny nanombohan'i Israely fanafihana iray hafa, telo herinandro lasa izao. Zanaka vavin'ny teratany Libiana iray, ny reniny ary izy no samy nanantena ny ho any Ejipta niaraka taminà teratany vahiny hafa.
Tamin'ny resany tamin'i Dan Cohen avy amin'ny Mondoweiss sy Lia Tarachansky avy amin'ny The Real News Network, nofariparitany toy izao ny toe-draharaha :
Niainga aho handositra ho any Ejpta niaraka tamin'ny reniko (teratany vahiny) sy @KayanAlSarraj ary @deemamesha ary voafandrika teo anelanelany ! #gaza
Androany aho mangataka izao tontolo izao hanohitra io rafitra tsy manaja ny maha-olona io. Angatahako ianareo mba hijery ny maha-olona anareo ary hanakana an'i #Israel . #gaza
Io no fanafihana fanintelony nataon'ny tafika Israeliana tao Gaza tao anatin'ny 6 taona. Ny faneriterena tafahoatra ataon'i Israely amin'ny faritra Palestiniana ao Gaza no antony mahatonga izao tontolo izao sy ny Firenena Mikambana hanondro io zara-tany io ho “faritra bodoin’” i Israely